04-10-2014 03:19 PM
igwdkU ref;av;o&ufvnf; tawmfav;udk aNcmufuyfoGm;wmygvm;/ tufwpfrjzpfwmawmif av;vavmuf&SdaejyDaemf/ t&ifwkef;u tcsdefawGudk owd&w,fAsm/
igwdkU ref;av;o&ufrSmjzifh pnfvdkufwm/ usHK;ab;rSmpnfum;aeyHkawG? nnqdk jydKifum;awG vdkufzrf;aewmqdkwmawG? aEGa&mufrvdkUyJ &Sdao; rD;cPcPavmifwmawG? ref;av;u tvSLMuD;yHkrsm; &efukefu tEkynmonfawGawmif vm&w,fqdkwmawG? nbufxd armfawmfyDu,fawGu qdkifu,fawG um;awG zrf;aewmawG? oifMuef txl;avsmhaps;qdkyD; tjydKiftqdkif aps;awGa&mif;aeMuvdkU vrf;awG ydwfaew,fqdkwJhtaMumif;? ponf ponf ponfawGudk ajymr,fhvlawmif r&Sdawmhygvm;aemf. . . . . .
04-11-2014 03:21 AM
'DESpf ref;oBuFef pnfpnfum;um; jzpfrSmyg . . . .
rESpfwkef;u EdkifiHa&;y#dycawG bmoma&;tjiif;yGm;rIawGaMumifh vlawG aMumufvefYNyD; tjyifudk rxGuf&JMubl;/ txl;ojzifh vlpkvla0; jzpfwJh ae&mawG vltkyfBuD; &dSwJh ae&mawGaygh/ vlBuD;awGvnf; olwdkY uav;awGudk rvTwfcsifMubl; oBuFefwGif; AHk;aygufrnfwdkY tufqpfyufrnfwdkY bmwdkY nmwdkY owif;oJhoJh Mum;ae&oudk;/
'DESpfawmh at;aq;yg r@myfawGvnf; ydkaqmufvkyfcGifh ay;xm;w,f/ usKHk;ajrmufbufwGif S.I.R tzGJU? udkpdk;olvnf; ref;oBuFefrSm azsmfajzygr,f? NrdKUawmf0ef ESifh Alphine r@myfwdkYwGif emrnfBuD; tEkynm&Sifrsm; toD;oD; azsmfajzMuOD;rnf qdkawmh ydkaysmfzdkY aumif;rSmyg ydkpnfum;oGm;rSmyg/ ,ckaemufydkif; yGifhvif;jrifomrIvnf; &dSvmNyD;qdkawmhum jynfoljynfom;awG vGwfvGwfvyfvyf aysmfaysmf&Tif&TifeJY ESpfopful; twmoBuFefudk jzwfausmfEdkifMurSmyg/
uRefawmf ref;ajrwGif av;ESpfwm ynmqnf;yl;cJhygw,f (oDcsif;qdkaejcif; r[kwf&yg)
'gayr,fh ref;oBuFef wcgrS rETJcJhzl;bl; ausmif;ydwf&uf oBuFefcsdefcgqdk udk,fhtdrfudk,fhe,fyJ jyefaeusqdkawmh ref;oBuFefqdkwm bmrSef; rodcJhygbl; raysmfcJhygbl;/
tck 'DESpf ref;oBuFefudk oGm;vnfcsifpdwf &dSwJhtcgusawmh wpfa,mufrS rac:Mubl; :(
odkYjzpfygí &efukefrSmyJ r@myfxdkifNyD; at;at;csrf;csrf;eJY ESpfopfudk BudKqdkygr,f
ESpfopfr*FvmwGif vlom;tm;vHk; usef;rmcsrf;omvef;jzmEdkifMuygapAsm . . . .
rEÅav;NrdKU jzpfwnfvmyHk ordkif;taMumif;yg/ odol &dSrnf rodolvnf; &dSygrnf/
rEÅav;NrdKUeJY ywfoufNyD; odaecJhwmav;awGudk em;vnfovdk jyefajymjyaejcif; jzpfonfhtwGuf uRefawmf wifjyyHk raumif;rGefcJhvQif ryDjyifcJhvQif em;vnfcGifhvTwfay;ygvdkY OD;pGmawmif;yefyg&ap/
twdkcsHK;ajym&vQif rGefol&Jaumif; ordefA&rf; ESifh w&kwfol&Jaumif; ZmrPDwdkY olaoudk,fao tNydKiftqdkif wdkufcdkufcJhMuonfh ae&ma'oudk tpGJjyKNyD; rEÅav;NrdKU[k emrnfwGifvmcJhjcif; jzpfonf/
t&ifwkef;u rEÅav;NrdKU r&dSao;yg vuf&dS tif;0NrdKUa[mif;vdkY ac:qdkMuwJh tif;0NrdKUyJ &dSygw,f/ tif;0aejynfawmfudk tkyfpdk;aewJh bk&ifrif;acgif jzpfonf/ waeY w&kwfjynfrS ppfonftiftm; taygif;tyg;wpfzGJU tif;0jynfudk csDwufvmMuNyD; rif;BuD;xHudk ppfonftcsif;csif; wdkufcdkufMuvQif ESpfOD;ESpfzuf tusdK;r&dSbJ vltrsm;tjym; ao;qHk;Mu&vdrfhrnf trdefYqdkonf/ xdkYaMumifh tawmfqHk;ol&Jaumif; wpfa,mufcsif; pD;jcif; wdkufcdkufMuzdkY awmif;qdkvm&m rif;BuD;rS oabmwlvdkufonf/ w&kwfol&Jaumif; emrnfBuD; ZmrPDeJY wdkufcdkufNyD; jrefrmbufrS &HI;cJhonf&dSaomf tif;0aejynfawmfudk odrf;ydkufNyD; w&kwfvufatmufudk ae&ygrnf olwdkY &HI;cJhonf&dSaomf aemufaemif b,fawmhtcgrS tif;0jynfudk &efrrlawmhbJ tdrfeD;csif;wdkif;jynftaejzifh aeoGm;ygrnf[k uwdjyKygonf/ rif;BuD;onf eef;wGif;rSL;rwfrsm; tultnDjzifh w&kwfol&Jaumif; ZmrPDeJY wdkufcdkufEdkifrnfholudk aoemywd&mxl; csD;ajrSmufygrnf[k wdkif;cef;vSnfhvnf aMujimarmif;cwfygaomfvnf; wpfOD;wpfa,mufrQ rawGU&dScJhyg rxGufvm&Jyg/ xdkpOftcg [Hom0wDjynf (yJcl; ) rS bk&ifrif;jrwf &mZm"d&mZf&JU vuf&Hk;awmf rGefol&Jaumif; ordefA&rf;onf tif;0bk&ifrif;acgif\_ zrf;qD;csKyfaESmifjcif;udk cHae&NyD; tcsKyfxJwGif &dSaeygonf/ ZmrPDeJY wdkufcdkufEdkifrnfh ol&Jaumif;ray:vmao;awmh rif;BuD;ESifhwuG eef;wGif;rSL;rwfrsm;tm;vHk; acgifcJaeMuwmudk ordefA&rf; Mum;odcJhaomf ]igonf tcsKyfxJwGif aewmMuawmh vIyfvIyf&Sm;&Sm; r&dScJhonfrSm MumcJhavNyD ysif;p&maumif;vSNyD/ vlvlcsif; bmrS aMumufp&mr&dSyg igonf odMumrif;u vGJ&if rnfolYudkrqdk wdkufEdkifygonf} tapmifhMuyfrsm;rS wpfqifh rif;BuD;udk avQmufwifcdkif;onf/ rif;BuD;onfvnf; rGefol&Jaumif; ordefA&rf;\_ wdkuf&nfcdkuf&nfeJY tpGrf;owådudk od&dSaeojzifh 0rf;omtm;&pGmjzifh ordefA&rf;udk csufjcif;qifhac:um ZmrPDeJY wdkufcdkufzdkYtwGuf tvdk&dS&m awmif;apownf; rdefYqdkowJh/ ordefA&rf;rSvnf; jrif;aumif;t*Fg&yfeJY jynfhpHkwJh jrif;wpfaumifESifh vSHwpfvufwdkYudk awmif;qdkNyD; ZmrPD&JU OD;acgif;udk rif;BuD;a&SUarSmuf ,laqmifay;ygrnf qdkNyD; uwdjyKcJhonf/ aemufwpfaeYeHuf rdk;aomufcsdefcgwGif tif;0aejynfawmf\_ ajrmufjyif&yfvdkY ac:qdkwJh vuf&dS rEÅav;NrdKUBuD; wnf&dS&mt&yf uGif;jyifBuD;wGif wpfudk,fvHk; oHcsyfumtjynfh 0wfqifxm;wJh w&kwfol&Jaumif; ZmrPDeJY rGefol&Jaumif; ordefA&rf; wdkYonf ESpfOD;om; taotaMu wdkufcdkufMuzdkY qdkif;jyifavawmhonf/ ordefA&rf;onf uGif;wpfygwf ywfNyD; y&d,m,fjzifh vSHwpfvufeJY ppfa&;jy[ef yHkpHjzifh vufudk ajrSmufwufvdkufonf/ 'gudk jrifawmh ZmrPDonfvnf; udk,f[efwjyjyjzifh vufvdkufajrSmufygonf vufajrSmufvdkufawmh csdKif;Mum;rS oHcsyfumtusÐ tqufae&mrS vGwfaewm [muGuf &dSaewmudk ordefA&rf; awGU&dScJhonf/ xdkYaMumifh teD;uyf jrif;pD;oGm;NyD; cdkuf&if;&kef;&if; wdkuf&if;cdkuf&if; tcGifhomwmeJY ZmrPD&JU csdKif;Mum;xJudk vSHeJY xdk;xnfhvdkuf&m ZmrPDonfvnf; csufjcif;qdkovdk jrif;ay:rS jyKwfusoGm;avonf/ onfhaemuf ordefA&rf;onf ZmrPD&JU OD;acgif;udk ydkif;jzwfNyD;oumv rGefbmom - ]rmOf&av0f rmOf&av0f rmOf&av0f} jrefrmtoHxGuf - ]ref&av ref&av ref&av} t"dyÜm,f - ]EdkifNyD;a[h EdkifNyD;a[h EdkifNyD;a[h} oHk;Budrf a<u;ausmfum atmifyGJeJYtwl tif;0aejynfawmfudk jrif;pD;jyefvmNyD; tif;0bk&ifrif;acgifudk w&kwfol&Jaumif; ZmrPD&JU OD;acgif;awmfudk qufoygawmhonf/ rGefol&Jaumif; ordefA&rf;onf bk&ifrif;acgif&JU uwdtwdkif; aoemywd&mxl; csD;ajrSmufjcif; cH&NyD;aemuf [Hom0wDjynfrS rdrdt&Sifocif rGefbk&if &mZm"d&mZf&JU tyg;xHodkY jyefoGm;cJhavonf/ rGefol&Jaumif; ordefA&rf;onf w&kwfol&Jaumif; ZmrPDudk Edkifatmif wdkufcdkufEdkifcJhonf ae&muGif;jyif t&yfa'oudk tpGJjyKNyD; ]rmOf&av0f-ref&av-EdkifNyD;a[h} !KifrmOf&av0f - odef;ref&av - EdkifNyD;a[hNrdKU [k emrnfwGifvmcJhonf/ ]rmOf&av0f rmOf&av0f - ref&av ref&av} rGeftoHxGufrSonf ref;wav ref;wav - rEÅav; rEÅav; jzpfwnfvmjcif; jzpfonf/
udk;um; - rGef&mZ0ifordkif;usrf;/
07-04-2014 08:02 AM
[dkaeYu towfcHvdkuf&wJY aumifav;&JU ema&;udk vdkufydkYwkef; bmomjcm;awGbufu qJvdkYqdkNyD; 22 vrf;rSm tck &efawG jzpfukefMuNyDajymw,f/
Long time no see vdkU t&ifEIwfqufyg&apAsm/
ckvnf; ukodkvfa&;rvdkU uRefawmfcspfaom usL;ypfMuD;xJu abmfabmfawGudkvnf; &apcsifvdkU vmcJhwmyJAs/
32vrf;? vrf;80eJU 81vrf;Mum;rSm q&mawmf a'gufwmeE´rmvmbd0Ho &JU w&m;yGJ&Sdw,fAs/
27-11-14 &ufaeU n7em&D
aemufwpfcku 81vrf;? vrf;30eJU 29vrf;Mum;rSm q&mawmf t&Sifukrm& &JU w&m;yGJ&Sdygw,f/
03-21-2015 07:19 AM
Today Mandalay ဆန္ဒပြတယ်နော်။
"ပညာရေးကို မြှင့်တင်ပြီး မြန်မာပြည်ကြီးကို ကယ်တင်ပါ" ဆိုတဲ့ စာတန်းပါ စတေကာလေးတွေလည်း ဝေတယ်။
"လေးပွင့်ဆိုင် သဘောထားတူညီချက်အား လေးစားလိုက်နာရေး"
"ပင်မ ကျောင်းသားသပိတ်အား အကြမ်းဖက်ဖြိုခွဲခြင်းအပေါ် ရှုတ်ချ ဆန္ဒထုတ်ဖော်ပွဲ"
စတဲ့ စတဲ့ စာတန်းများကို ကိုင်ဆောင်လျက် မြတောင် ဘုန်းကြီးကျောင်းရှေ့ မှ စတင်. .. .
Today Mandalay မြို့ဂုန်ရောင် ရုပ်ရှင်ရုံ အသစ်ပြန်ဖွင့်တယ်နော်။
လာလိုက်တဲ့ အနုပညာရှင်တွေဗျာ အများကြီးပဲ ။
ကိုလူချောတွေလည်း တွေ့လိုက်တယ်၊ ဟိန်းဝေယံကြီးလည်းတွေ့လိုက်တယ်၊ မိုးမိုးမြင့်အောင်၊ ပန်းနုသွေး မင်းသမီး၊ ဦးအောင်ခိုင်နဲ့ အန်တီဝါ။ . ...စတဲ့ စတဲ့. ...
tqJcHzdkYudkyJ facebook rSm tqJrcHcsifawmh 'DrSmyJ jiif;Muwmaygh/
uRefawmfu aq;ynm todkif;t0dkif;u r[kwfayr,fh eDpyf&m ygwfoufygw,f/ uRefawmfpdwful;aygufwkef;av;a&;ayr,fh wu,fwifcsifwmu aemuf4&ufavmufaerSyg/ 'gayr,fh rajymvdkuf&&ifvnf; &ifxJckvkMuD;rdkY ajymOD;r,f/
a':atmifqef;pkMunfudk ,Hkygw,f/ ,HkvdkYyJ vufoef;av;eJY oufaojycJw,f/
tJrMumbl;tckawGYwmyJ/ NLD uae a'gufwm&JvGifudk jrdKUawmf0efcefYw,fAs/ tJwmoabmrawGYbl;qdkwmxuf jzpfudk rjzpfoifhbl;/ OD;&JvGifeJY oufqdkifolawG zwfrd&ifawmh rwwfEdkifbl;/ ajymrSmyJ/ rMudKufwmudk rMudKufaMumif;tcsuftvufeJY ajym&ifvnf; ajymvdkY&w,frdkUvm;/
1/ a'gufwm&JvGifonf q&m0efwpfa,mufjzpfonf/ q&m0efwpfa,mufjzpfonfhtjyif olonf tkyfcsKyfa&;wGif yg0ifywfoufrSKenf;cJhonf/ xdkolwpfa,mufudk jrdKUawmf0efcefYjcif;onf bmaMumifhygvJ/
2/ rdk;usa&Tudkrsm;udk q&m0efrsm; uefYuGufcJhonf/ ,ck aq;buftkyfcsKyfa&;wGif yg0ifrSKenf;cJhonfh a'gufwm&JvGifudk jrdKUwpfjrDKU\_ jrdKUawmf0efcefYjcif;onf tb,fhaMumifhenf;/
3/ tqdkyg a'gufwmonf EdkifiHjcm;rsm;udk oGm;zl;vdrfhrnf/ odkYaomf ref;jrdKUwGif; b,fESpfygwf pHkatmifygwfzl;oenf;/
4/ tqdkyga'gufwmonf EdkifiHjcm;rS tawGUtMuHKrsm;&dSonf[k ajymayvdrfhrnf/ aq;ynmawGUtMuHKomjzpfvdrfh rnf/ jrdKUjytaqmuftODqdkif&m tawGUtMuHK&dSvdrfhrnf r[kwfay/
5/ tqdkyga'gufwmonf uGrf;pm;jcif;udk udkifwG,frnf[kqdkonf/ rnfodkYudkifwG,frnfudk rzwfzl;ojzifh ra0zefawmhyg/ odkYaomf uGrf;,ma&mif;jcif;? uGrf;pnf;urf;rJhaxG;jcif;om udkifwG,fum&vdrfhrnf/ uGrf;pm;ojzihf 'Pf&dkufjcif;awmh vkyfvdkYr&wmudk odrnf[kxifonf/ tqdkyg uGrf;pm;jcif;onf blYtcGifhta&;wckvnf; jzpfygonf/ uGrf;,ma&mif;oltm; pnf;Muyfjcif;jyKygu ydkrdk tajymcH&udef;&dSonf/ xdkYaMumifh tb,fodkYudkifwG,frnfenf;/
6/ ernfMuD;aeaom armufrmonfh q&m0ef[k tajymcH&onfrSm trSefjzpfygovm;/ aq;zdk;MuD;wmuawmh rajymvdkyg/ olYynm olYwefaMu;&dSygw,f/
aemufqHk;awmh q&m0efawGudk axmif;csifvdkY OD;&JvGifudk ypfauR;wmvm;xifrdw,f/ rdk;usa&Tudk,frvdkcsifwJh [mawGudk tjcm;todkif;t0dkif;xJ rdk;usa&Tudk,fvkyfay;vdkufawmh Munfhaumif;jyDav/ civil qdkwm vG,fvm;? EdkifiHa&;qdkwmvG,fvm;? tkyfcsKyfwmvG,fvm; Munfhxm;vdkYrsm;ajymcsifwmvm; ar;rdyg&JU/
rdk;usa&Tudk,fawGudk q&m0efawGu uefYuGufayr,fh uRefawmfodyfrygcJhygbl;/ tqdkyg rdk;usa&Tudk,fwm wu,fawmfw,fqdk MudKqdk&rSmyg/ q&m0efqdkwm tukefrvkyfwwfygbl;/ tawGUtMuHKqdkwm uGmygw,f/
udk,f0ifr,fh todkif;t0dkif;twGuf udk,fu ynmwwfxm;rS rdk;usa&Tudk vkyfvdkY&wm odapcsifw,f/ OD;&JvGif tqifajyygapvdkYyJajymcsifygw,f/ tpm;cHzdkY xdk;auR;wJh yGef;waumif rjzpfygapeJYvdkY..............
'DaeU uHraumif;wJh csdKyJhwa,muf/
မန္တလေးမှာ ဘာတွေ လိုအပ်နေသလဲ
အမှန်အတိုင်း ပြောရရင် ကိုယ်လည်း မြို့ပြထူထောင်ဖူးတဲ့ အတွေ့အကြံမရှိ .. ရှိတဲ့အတွေ့အကြုံဆိုလို့ ၂၅ နှစ်လောက် မရပ်မနား ဂိမ်းဆော့ဖူးတဲ့ အတွေ့အကြုံပဲ ရှိတယ်။ ဆော့ဖူးတာကလည်း စစ်တိုက်တဲ့ ဂိမ်းပဲ များပြီး Management ဂိမ်းတွေဆို ပါရမီနည်းလွန်းလို့ သိပ်တောင် မဆော့ဘူး။ ဒါပေမယ့် ကိုယ့်မန္တလေး မြို့ကြီး တိုးတက်စေချင်၊ စည်ပင်စေချင်၊ သာယာစေချင်တဲ့ စိတ်ကြောင့် တတ်သလောက် မှတ်သလောက် လိုက်လေ့လာပြီး စာအုပ်ပေါင်းများစွာ ဖတ်ခဲ့၊ မြို့ရွာ ဖွံ့ဖြို့ရေးနဲ့ ပတ်သက်တာတွေ ရှာဖွေလေ့လာခဲ့သလောက် လေ့လာမိတာနဲ့ ခုလက်ရှိ မြို့တော်ဝန်က စီမံနေတာတွေကို ချိန်ထိုးကြည့်မိသလောက် အတော်လေး စိတ်ပျက်လက်ပျက် ဖြစ်မိတာတော့ အမှန်ပဲ။ အထူးသဖြင့် ရှိပြီသား မြို့ဟောင်း တစ်ခုကို စည်ပင်လာအောင်၊ စည်ပင်ပြီးသား မြို့တစ်မြို့ကို ပိုမိုတိုးတာလာအောင် စီမံရတာ အတော်ခေါင်းစားရတဲ့ ကိစ္စပေကိုး။
လက်ရှိ မန္တလေးမြို့တော်ဝန်က မန္တလေးမြို့နဲ့ ပတ်သက်ပြီး ဖြေသွားတဲ့ အင်တာဗျူးတွေကို ဖတ်လိုက်ရင် ပိုသိသာလွန်းတယ်။ အရမ်း နှုတ်ဖွာပြီး စိတ်ကူးယဉ်ဆန်လွန်းတဲ့ ကိစ္စတွေကို ဦးစားပေး ပြောသွားတယ်။ လက်တွေ့မှာလည်း ကျုံးထဲက မန်းသီတာဥယျာဉ်ကို ရက်ပေါင်း ၁၀၀ အတွင်း တည်ဆောက်မယ်လို့ ကြေညာထားတယ်။ သူ့ရဲ့ လက်ရှိ လုပ်ဆောင်ချက်တွေ အားလုံးဟာ မန္တလေးက လူလတ်ပိုင်းတွေနဲ့ သက်ကြီးပိုင်းတွေရဲ့ အိပ်မက်တွေကို အကောင်အထည် ဖော်နေသလိုလို မြင်ရမှာ ဖြစ်ပေမယ့် လက်တွေ့အမှန်တကယ် အရေးတကြီး လိုအပ်နေတာတွေနဲ့ နှိုင်းယှဉ်ကြည့်ရင်တော့ အတော်လေး ကွာဟနေတာကို တွေ့ရပါလိမ့်မယ်။
ဝေဖန်တဲ့ အလုပ်က လွယ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် တကယ်တမ်း မင်းကရော ဘယ်နေရာတွေမှာ ဘယ်လိုတိုးတက်အောင် လုပ်ပေးနိုင်လို့လဲလို့ မေးလာခဲ့ရင်တော့ အတော်လေး ဖြေရခက်တဲ့ ကိစ္စတွေ အများကြီး ရှိပါတယ်။ ဝေဖန်ရတာ လွယ်ပါတယ်။ ကောင်းလာအောင် အကြံပြုရတဲ့ အပိုင်းကတော့ အတော်ခက်ခဲပါတယ်။ အဲဒီတော့ ကျွန်တော်တို့ မန္တလေးမြို့ကြီးအတွက် မန္တလေးသား တစ်ယောက်အနေနဲ့ အဖြစ်စေချင်ဆုံး ကိစ္စတွေကို စုစည်းထားပြီး မြို့တော်ဝန်ဆီ အကြံပြုချင်ပါတယ်။ ကိုယ်တိုင်က ဘာကောင်မှ မဟုတ်တဲ့အတွက် လွဲမှားတာ၊ ချွတ်ချော်တာ၊ အထင်မှားတာ၊ မလိုအပ်တာတွေ ရှိကောင်း ရှိနိုင်မှာ ဖြစ်ပေမယ့် အကောင်းဆုံး ဖြစ်စေချင်တဲ့ ဆန္ဒနဲ့ ရေးထားတာ ဖြစ်တဲ့အတွက် နည်းနည်းလောက် အချိန်ပေးဖတ်ပြီး အကြံပြုချက် အချို့ကို လက်တွေ့ အသုံးပြုနိုင်မယ်ဆိုရင်ကိုပဲ ကျေနပ်လှပါပြီ။
လက်ရှိ ခေတ်သစ် မန္တလေးမြို့မှာ အသက်တမျှ အရေးကြီးနေပြီး အခက်ခဲဆုံး ရင်ဆိုင်နေရတဲ့ အဓိက ပြဿနာကတော့ ယာဉ်ကြောပိတ်ဆို့မှုနဲ့ ယာဉ်မတော်တဆမှု မြင့်မားလာခြင်းပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ စီးပွားရေး တိုးတက်လာခြင်း၊ မြို့ပြလူဦးရေ တိုးပွားလာခြင်းနဲ့ ယာဉ်အစီးရေ များပြားလာခြင်းတွေဟာ အဓိက လက်သည်တရားခံ ဖြစ်ပါတယ်။ မန္တလေးမြို့ဟာ အတိတ်မှာ သာယာနေမယ့်မြို့၊ ပစ္စုပ္ပန်မှာပဲ ကျေနပ်နေမယ့်မြို့ဆိုရင်တော့ ဒီကိစ္စဟာ သိပ်အလေးအနက် ထားစရာ မလိုအပ်ပေမယ့် ဆက်လက်ပြီး ရှင်သန်တိုးတက်နေမယ် ဆိုရင်တော့ ဒီကိစ္စဟာ အတော်ကြီး ခေါင်းခဲစရာ ကိစ္စ ဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်။ မြို့ပြစီးပွားရေး တိုးတက်လာလို့ပဲ ဖြစ်ဖြစ်၊ နိုင်ငံခြား ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေ ဝင်လာလို့ပဲ ဖြစ်ဖြစ် မန္တလေးဟာ ဆက်လက်တိုးတက်လာဦးမယ်ဆိုရင် ယာဉ်အစီးရေ ပိုမိုများပြားလာဖို့ပဲ ရှိပြီး ယာဉ်ကြောပိတ်ဆို့မှုနဲ့ ယာဉ်မတော်တဆမှုတွေ ထပ်မံတိုးပွားလာဖို့ ရှိနေပါတယ်။
လက်ရှိအခြေအနေမှာလည်း မန္တလေးမြို့ရဲ့ ယာဉ်အသုံးပြုမှု ပုံစံကို အခြေပြုပြီး ရာဇဝတ်မှုတွေ တိုးပွားလာနေပြီး လုယက်မှုအပြင် လူသေဆုံးမှုတွေပါ ဖြစ်ပေါ်နေပါတယ်။ ဒီပြဿနာတွေကို မြန်မာနိုင်ငံ ရဲတပ်ဖွဲ့နဲ့ ယာဉ်ထိန်းရဲတွေအပေါ် ပုံချနေရုံနဲ့ ပြဿနာတွေ ပြေလည်သွားမှာ မဟုတ်ပါဘူး။ ယာဉ်ထိန်းရဲတွေနဲ့ ရဲတပ်ဖွဲ့ရဲ့ စွမ်းဆောင်နိုင်မှုဟာလည်း အကန့်အသတ် ရှိနေပြီး ပြည်သူလူထုနဲ့လည်း သဟဇာတ ဖြစ်ဖို့ အချိန်အများကြီး ပေးရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီကိစ္စကို မြို့တော်ဝန်ရဲ့ အာဏာသက်ရောက်မှုကနေ ၆၀% လောက်အထိ ဖြေရှင်းပေးနိုင်ပါတယ်။
ပထမဆုံး ဖြေရှင်းနည်းကတော့ အန္တရာယ်ကင်းပြီး လုံခြုံစိတ်ချရတဲ့ အများသုံး ယာဉ်ရထားစနစ် တည်ဆောက်ခြင်း၊ ဖော်ထုတ်ခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။ ကမ္ဘာ့နိုင်ငံအသီးသီးရဲ့ မြို့ပြလူနေမှုစနစ်မှာ အရေးအပါဆုံးယာဉ်ဟာ အများသုံး ရထားစနစ် ဖြစ်ပါတယ်။ မန္တလေးမြို့အနေနဲ့ လက်ရှိအနေအထားအရ မြို့တွင်းရထားသော်လည်းကောင်း၊ မြို့ပတ်ရထားသော်လည်းကောင်း ပြေးဆွဲနိုင်ဖို့ အခြေအနေ အလွန်နည်းပါးနေပါပြီ။ ဒါကြောင့် မြို့ပတ်ရထားအစား အများသုံး ဘတ်စ်ကား စနစ်သော်လည်းကောင်း၊ မြေအောက် ရထား စနစ်သော်လည်းကောင်း တည်ဆောက်မှသာ အဆင်ပြေမယ့် အနေအထားလည်း ဖြစ်ပါတယ်။
အများသုံး ဘတ်စ်ကားစနစ်ဟာ လက်ရှိမှာလည်း လည်ပတ်နေပြီး အဆင်မပြေမှုများ ကြုံတွေ့နေရပါတယ်။ အချိန်မမှန်ခြင်း၊ မြို့တွင်းနေရာအနှံ့ လွှမ်းခြုံမှု မရှိခြင်း၊ ယာဉ်နှင့် သုံးစွဲသူဦးရေ မမျှတခြင်း၊ အန္တရာယ်များခြင်းနဲ့ စည်းကမ်းချိုးဖောက်မှုများကြောင့် အားကိုးလို့ ရတဲ့ အနေအထား မရှိပါဘူး။ ဒါ့အပြင် ဘတ်စ်ကားကြီးတွေဟာ မန္တလေး မြို့တွင်းလမ်းတွေနဲ့ အဆင်မပြေပဲ ယာဉ်ကြောပိတ်ဆို့မှုကို ပိုမို ဆိုးရွားစေပါတယ်။ ဒါကြောင့် လက်ရှိဘတ်စ်ကား စနစ်အစား ပိုမိုကောင်းမွန်ပြီး အသုံးပြုရ အဆင်ပြေမယ့် စနစ်ကို တည်ဆောက်ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ရန်ကုန်မြို့မှာ အသုံးပြုနေတဲ့ ဘတ်စ်ကားစနစ်ကလည်း လက်ရှိမှာတောင် အတော်လေး အဆင်မပြေ ဖြစ်နေကြပြီး ယာဉ်ကြောပိတ်ဆို့မှု ဒဏ်ကို ခံစားနေကြရပါတယ်။ ဒီတော့ ကျွန်တော်တို့အတွက် အသင့်လျော်ဆုံး ပုံစံနဲ့ အန္တရာယ်အကင်းဆုံး ဘတ်စ်ကားစနစ်မှသာ မြို့ပြဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကို အထောက်အကူပြုပြီး ယုံကြည်စိတ်ချစွာ သုံးစွဲနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
04-30-2016 06:01 AM
မန္တလေးမြို့ရဲ့ ပြဿနာတွေထဲမှာ အိမ်ကနေ တစ်နေရာရာကို မိတ်ဆွေ သူငယ်ချင်း အပေါင်းအသင်းတွေပဲ ဖြစ်ဖြစ်၊ လုပ်ငန်းအရ သိကျွမ်းကြသူတွေပဲ ဖြစ်ဖြစ် ဆုံတွေ့မယ်ဆိုရင် ကိုယ်ပိုင်ယာဉ်တွေကို အဓိက အားကိုးနေကြရပါတယ်။ လက်ရှိအချိန်မှာတောင် အချို့နေရာတွေမှာ ယာဉ်ရပ်နားဖို့ လုံလောက်တဲ့ အကျယ်အဝန်း မရနိုင်တာကြောင့် ပြဿနာတွေ အများအပြား ကြုံတွေ့နေရပါတယ်။ သာဓက အားဖြင့် Diamond Plaza မြောက်ဖက်ခြမ်းက ဆိုင်ကယ်ရပ်နားကွင်းဟာ လမ်းမပေါ်ကို မတန်တဆ နေရာယူထားပြီး ယာဉ်ကြောကြပ်တည်းမှု ဖြစ်ပေါ်စေနေတာကို တွေ့ရမှာပါ။ မြို့ခံတွေအတွက် ဆိုင်ကယ်တစ်စီး၊ ကားတစ်စီးဟာ လွယ်ကူပေမယ့် အခြားဒေသက လာရောက်စီးပွားရှာသူတွေ၊ ခေတ္တလာရောက်သူတွေ အတွက်တော့ ယာဉ်တစ်စီးပိုင်ဆိုင်ဖို့ဆိုတာ အတော်ကို ကရိကထများပြီး အကုန်အကျ များပါတယ်။ အဲဒီအတွက် အငှားယာဉ်အဖြစ် ဆိုင်ကယ်တွေနဲ့ မော်တော်ကားတွေကို အငှားယာဉ်အဖြစ် ငှားရမ်းနိုင်ပေမယ့် ကုန်ကျစရိတ် များပြားပြီး အခြားမြို့တွေထက် ဈေးကြီးပါတယ်။ ပြီးရင် အန္တရာယ်ကင်းရှင်းမှုအတွက်လည်း အာမခံလို့ မရပါဘူး။
မန္တလေးရဲ့ ဘတ်စ်ကားတွေဟာလည်း နေရာအနှံ့ မရောက်သလို ရန်ကုန်လိုပဲ လမ်းလုခြင်း၊ ယှဉ်ပြိုင်မောင်းခြင်းများ မကြာခဏ ကြုံတွေ့နေရပါတယ်။ သွားလိုတဲ့နေရာ ရောက်ဖို့ တကွေ့တပတ်ကြီး သွားရခြင်း၊ ရပ်နားချိန် ကြာမြင့်ခြင်းနဲ့ အန္တရာယ်များခြင်းတို့ကလည်း ငွေကြေးတတ်နိုင်သူတွေအတွက် ဘတ်စ်ကား အသုံးပြုလိုမှုကို တားမြစ်ထားသလို ဖြစ်နေပါတယ်။
မန္တလေးမြို့ရဲ့ လမ်းမများဟာ လေးထောင့်ကျကျ အကွက်ချထားတာ ဖြစ်ပြီး သွားလာရ လွယ်ကူပါတယ်။ အဓိက လမ်းမကြီးအချို့ကလွဲရင် ကျန်တဲ့နေရာတွေမှာ လမ်းရှင်းနေပါသေးတယ်။ အကောင်းဆုံး ဖြေရှင်းလို့ရတာကတော့ မြို့ရဲ့ ဘတ်စ်ကားလိုင်းတွေကို လမ်းကြောင်းတစ်ခုတည်းကနေ စုပြုံပြီး သွားစေမယ့်အစား နယ်အပိုင်းလေးတွေအလိုက် လမ်းကြောင်းတွေ သတ်မှတ်ပေးပြီး အန္တရာယ်ကင်းစွာ သွားလာခွင့်ပြုမယ်ဆိုရင် အလွန်သင့်တော်မယ်လို့ ထင်မြင်မိပါတယ်။ လူသွားလူလာ ထူထပ်တဲ့ လမ်းတွေမှာ စုပြုံတိုးပြီး သွားခွင့်ပြုမယ့်အစား သက်ဆိုင်ရာ လမ်းကြောင်းအလိုက် ယာဉ်အစီးရေ များများနဲ့ သက်တောင့်သက်သာ သွားခွင့်ရမယ်ဆိုရင် အများသုံး ယာဉ်အသုံးပြုတဲ့ ဓလေ့ ထွန်းကားလာပြီး ဆိုင်ကယ်ကြောင့် ဖြစ်တဲ့ ယာဉ်မတော်တဆမှုကို လျှော့ချပေးနိုင်မှာ ဖြစ်သလို လုယက်မှုအန္တရာယ်ကိုလည်း အတော်အသင့် ကာကွယ်ပြီးသား ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ မန္တလေး တက္ကသိုလ် အနီးတဝိုက်မှာ ညဖက်ရပ်နားထားတဲ့ ယာဉ်အစီးရေကို ကြည့်ရင် ဒီပြဿနာဟာ တဖြည်းဖြည်း ဘယ်လောက်ကြီးမားလာသလဲဆိုတာကို ခန့်မှန်းလို့ ရနိုင်ပါတယ်။
မြို့တွင်း ကုန်စည်သယ်ပို့မှုမှာလည်း လူစီးယာဉ်များလိုပဲ သီးသန့်ကားလိုင်းများ ထားပြီး ဖြေရှင်းဖို့ အကြံပြုချင်ပါတယ်။ မန္တလေး ဘူတာကြီးကို ကုန်စည်သယ်ပို့မှု အဓိကနေရာအဖြစ် သတ်မှတ်ပြီး မြို့စွန်က ကုန်စည်တွေကို မြို့တွင်း ပြန်လည် ဖြန့်ဖြူးမှု ဗဟိုဌာနအဖြစ် အသုံးပြုစေလိုပါတယ်။ လူစီးရထားကို မြို့အစွန်က ဘူတာတစ်ခုမှာ ရပ်နားစေပြီး မြို့တွင်းကိုတော့ ကုန်စည်သီးသန့် သယ်ယူပို့ဆောင်မှု ပြုလုပ်ပေးစေလိုပါတယ်။ ဒါဆိုရင် မြို့တွင်းကို ကားနဲ့ ကုန်စည် သယ်ယူပို့ဆောင်ရခြင်းကြောင့် ဖြစ်လာတဲ့ သိပ္ပံလမ်းနဲ့ ရန်ကုန်မန္တလေးလမ်းဆုံက ယာဉ်ကြောပိတ်ဆို့မှုနဲ့ ယာဉ်အန္တရာယ်တွေကို အထိုက်အလျောက် လျော့ကျစေနိုင်ပြီး ကုန်စည်လည်ပတ် စီးဆင်းမှုကိုလည်း အဆပေါင်းများစွာ ပိုမိုလျင်မြန်စေမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် စက်မှုဇုန်နဲ့ မြို့ကို ဆက်သွယ်ပေးမယ့် ရထားလမ်းအသစ်ကို မြို့ပတ်ရထားလမ်း အသစ်အဖြစ် ဖောက်လုပ်ပေးစေလိုပါတယ်။ ဒါမှသာ မြို့ထဲကနေ စက်မှုဇုန်များကို အလွယ်တကူ သွားလာနိုင်မှာ ဖြစ်သလို မြို့ပတ်ရထားလမ်းအဖြစ် မြို့ရဲ့ မြောက်ဖက်ခြမ်းနဲ့ တောင်ဖက်ခြမ်းကို ဆက်သွယ်ပေးပြီး အချိန်နဲ့ စွမ်းအားကုန်ဆုံးမှုကို လျော့ချပေးနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
လက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံက မီးရထားလမ်းတွေဟာ ခေတ်မမီတော့သလို ကျဉ်းမြောင်းလွန်းနေတယ်လို့ မှတ်သားဖူးပါတယ်။ အကယ်၍သာ မီးရထားလမ်းသစ်များ ဖောက်လုပ်ခဲ့ရင် မူလ မီးရထားလမ်းများနဲ့ မချိတ်ဆက်ပဲ သီးခြားလမ်းသစ်များအနေနဲ့ နည်းပညာသစ်များနဲ့ ဖောက်လုပ်သင့်ကြောင်းလည်း အကြံပြုချင်ပါတယ်။ မန္တလေးမြို့သာမက မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးအတွင်းမှာ ရှိတဲ့ မြို့တိုင်းကို ဆက်သွယ်ပေးမယ့် တိုင်းဒေသကြီးပတ် မီးရထားလမ်း တစ်ခုကိုလည်း ဖောက်လုပ်ဖို့ အကြံပြုလိုပါတယ်။ သို့မှသာ ကုန်စည်စီးဆင်းမှု မြန်ဆန်လာပြီး အကုန်အကျ သက်သာမှာ ဖြစ်သလို Toll Gate များကို ဖြတ်သန်းရသည့်အတွက် ကုန်ကျစရိတ်များ မြင့်တက်လာမှုကို လျှော့ချပေးနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
အကယ်၍ မြို့ပတ်ရထားလမ်းနဲ့ အများပြည်သူသုံး ယာဉ်စနစ်သာ ကောင်းကောင်းဖွံ့ဖြိုးခဲ့မယ်ဆိုရင် လမ်းတွေပေါ်မှာ အုပ်စုဖွဲ့ ရမ်းကားခြင်း၊ ဆိုင်ကယ်ဖြင့် ဒုစရိုက်မှု ကျူးလွန်ခြင်း၊ အသက်မပြည့်သေးပဲ အခြေအနေအရ ယာဉ်မောင်းနှင်ခြင်း၊ ယာဉ်လိုင်စင် မရှိပဲ သို့မဟုတ် မပါပဲ ယာဉ်မောင်းနှင်ခြင်း၊ ယာဉ်မောင်းလိုင်စင် မရှိပဲ သို့မဟုတ် မပါပဲ ယာဉ်မောင်းနှင်ခြင်း၊ ယာဉ်မောင်းမကျွမ်းကျင်ပဲ ယာဉ်မောင်းနှင်ခြင်း၊ မနိုင်ဝန်တင်၍ မောင်းနှင်ခြင်း အစရှိတဲ့ အန္တရာယ်ရှိသော ပြဿနာ အများအပြားကိုလည်း အလိုအလျောက် ဖြေရှင်းပြီးသား ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ တဖက်ကလည်း ဘတ်စ်ကားလိုင်းများကို သေချာကြပ်မတ်စစ်ဆေး ခွင့်ပြုခြင်း၊ လမ်းကြောင်းအတိုင်း မောင်းနှင်ခြင်း ရှိမရှိ စစ်ဆေးခြင်းတို့ကို အလေးအနက်ထား ပြုလုပ်ပေးဖို့ လိုအပ်ပါလိမ့်မယ်။ ဒါဆိုရင် ကျွန်တော်တို့မြို့ရဲ့ မလိုအပ်ပဲ ဖြစ်ပွားနေတဲ့ ယာဉ်မတော်တဆမှုများ၊ ဒုစရိုက်မှုများကို ၅၀% အထိ လျှော့ချပေးနိုင်ပါလိမ့်မယ်။ ဒါ့အပြင် မကြာခဏ ပျက်စီးလေ့ရှိတဲ့ လမ်းမများကို အသုံးပြုမှု လျော့ကျသွားမှာ ဖြစ်တဲ့အတွက် လမ်းပြင်ဆင်စရိတ်ကိုလည်း ၁၀ ရာခိုင်နှုန်းခန့် လျှော့ချပေးနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
မြို့တစ်မြို့ရဲ့ အနာဂတ်ဟာ အဲဒီမြို့နေလူထုရဲ့ အနာဂတ်လည်း ဖြစ်ပါတယ်။ မြို့နေလူထုရဲ့ အနာဂတ်ဟာ လက်ရှိအချိန်မှာ ပညာသင်ကြားနေကြပြီး နောင်တချိန်မှာ မြို့ရဲ့ တာဝန်ကို ပခုံးပြောင်း ထမ်းဆောင်ကြမယ့် ပညာသင်အရွယ် ကျောင်းသားမောင်မယ်တို့ရဲ့ လက်ထဲမှာ တည်ရှိနေပါတယ်။ ဒါကြောင့် ကိုယ့်မြို့ရဲ့ အနာဂတ်လှပဖို့အတွက် မြို့ရဲ့ ပညာရေးပိုင်းကိုလည်း အာရုံစိုက်သင့်ပါတယ်။ ဒီကိစ္စဟာ ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနနဲ့ တိုက်ရိုက်သက်ဆိုင်နေတာ မှန်ပေမယ့် မြို့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့နဲ့လည်း သွယ်ဝိုက်တိုက်ဆိုင်နေပါတယ်။ မြို့နေ ကျောင်းသားကျောင်းသူများ ပညာရေး မြင့်မားလာစေဖို့၊ ကျန်းမာကြံ့ခိုင်လာစေဖို့နဲ့ ဉာဏ်ရည်ဉာဏ်သွေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ပြီး ဖန်တီးနိုင်စွမ်းအား မြင့်မားလာစေဖို့ မြို့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့မှာ လုံးလုံးလျားလျား တာဝန်ရှိပါတယ်။ ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေ ကျောင်းကို စိတ်အေးချမ်းသာ ဘေးကင်းစွာ သွားလာနိုင်ဖို့ မြို့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့အနေနဲ့ စီစဉ်ပေးရပါမယ်။
မန္တလေးမြို့မှာ ကျောင်းသွားကျောင်းလာ အချိန်အတွင်း ကျောင်းပတ်ဝန်းကျင်မှာ ယာဉ်ထိန်းရဲများနဲ့ လမ်းရှင်းပေးပြီး ယာဉ်ကြောရှုပ်ထွေးမှုနဲ့ ယာဉ်အန္တရာယ်တွေကို ကာကွယ်ထိန်းချုပ် ပေးပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ကျောင်းသားမိဘများက ကိုယ့်သားသမီးတွေကို ကိုယ်တိုင် အကြိုအပို့ လုပ်နေကြရတယ်။ ကျောင်းက အကြိုအပို့ကား စီစဉ်ပေးပေမယ့် ငွေကြေးအင်အား ချို့တဲ့ခြင်း၊ လူ့စွမ်းအား အရင်းအမြစ် ရှားပါးခြင်းကြောင့် အချို့ ကျောင်းတွေသာ ကိုယ်ပိုင် စီစဉ်နိုင်ပြီး ကျောင်းသားပမာဏနဲ့ ကျောင်းကားနဲ့လည်း ဝန်မမျှတမှု ပြဿနာ ကြုံတွေ့ရပါတယ်။ ဒီလို စီစဉ်မပေးနိုင်တဲ့ ကျောင်းတွေအတွက် မြို့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ကနေ ကျောင်းကားများ ငှားရမ်းစီစဉ်ပေးခြင်း၊ အများသုံးယာဉ်ရထားများမှာ ကျောင်းသားများအတွက် အထူးအခွင့်အရေးအဖြစ် ဈေးနှုန်းသက်သာအောင် စီစဉ်ပေးခြင်းတို့ ပြုလုပ်ပေးသင့်ပါတယ်။
ပြီးခဲ့တဲ့ တက္ကသိုလ်ဝင်တန်း စာမေးပွဲမှာ စာမေးပွဲဖြေဆိုရန်အလာ ယာဉ်မတော်တဆမှုကြောင့် ကျောင်းသူကျောင်းသားအချို့ အသက်ဆုံးရှုံးရတဲ့ အဖြစ်မျိုးတွေ ကြုံတွေ့ခဲ့ရပါတယ်။ အများသုံး ယာဉ်ရထားစနစ်သာ ထွန်းကားလာခဲ့ရင် ဒီလို အဖြစ်ဆိုးမျိုး ကြုံတွေ့ရမှာ မဟုတ်သလို ကျောင်းကားစနစ်သာ ရှိခဲ့ရင်လည်း ဒီလို ပြဿနာမျိုးတွေ ကြုံတွေ့ရမှာ မဟုတ်ပါဘူး။ မြို့ရဲ့ အနာဂတ်ဟာ ကျောင်းသားကျောင်းသူတွေရဲ့ အနာဂတ်လည်း ဖြစ်တာကြောင့် ပညာရေး ဝန်ကြီးဌာနက အလုံးစုံ တာဝန်မယူနိုင်သေးခင် ကြားကာလမှာ မြို့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့က ကြားဝင်ကူညီပေးဖို့လည်း အကြံပြုလိုပါတယ်။ ဒါ့အပြင် ကျောင်းနဲ့ ကျောင်းပတ်ဝန်းကျင်မှာ ကျန်းမာရေးနဲ့ ညီညွတ်ပြီး သန့်ရှင်းမှုရှိအောင်လည်း မြို့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့မှာ အလျင်းသင့်သလို စီမံဆောင်ရွက်ပေးသင့်ပါတယ်။
ပညာသင်ကြားခြင်းဆိုတာဟာ စာအုပ်ထဲမှာ ပါတဲ့ စာပေတွေကို လေ့လာဖတ်ရှုရုံသာ မကပဲ ပြင်ပစာပေများ ဖတ်ရှုလေ့လာခြင်း၊ အတုမြင် အတတ်သင်ခြင်းနဲ့ သင်ကြားထားတဲ့ စာပေတွေကို လက်တွေ့အသုံးချခြင်းတို့လည်း ပါဝင်နေပါတယ်။ ဒါကြောင့် မြို့အတွင်းမှာ အများပြည်သူ စာပေဖတ်ရှုနိုင်ဖို့ ပင်မစာကြည့်တိုက်တစ်ခုနဲ့ စာကြည့်တိုက်ခွဲများ ဖွင့်လှစ်ပေးသင့်ပါတယ်။ သို့မှသာ လူငယ်တွေဟာ သူတို့ရဲ့ တန်ဖိုးရှိတဲ့ ငယ်ရွယ်စဉ် အချိန်ကာလတွေကို ကောင်းမွန်စွာ အသုံးချနိုင်ဖို့ အခွင့်အလမ်းကောင်းတွေ ရရှိနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ကျောင်းသူကျောင်းသားများအနေနဲ့ ဝယ်ယူဖတ်ရှုရန် လက်လှမ်းမမီနိုင်သော စာအုပ်စာပေများကို စာကြည့်တိုက်တွေမှာ ထားရှိပေးခြင်းဖြင့် မြို့ရွာတိုးတက်ရေးကို အများကြီး အထောက်အကူ ပြုနိုင်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် သိပ္ပံပြတိုက်များ၊ သမိုင်းပြတိုက်များ ဖွင့်လှစ်ပေးခြင်းဖြင့်လည်း လူငယ်တွေကို နည်းပညာနဲ့ ထိတွေ့ပေးခြင်း၊ ကိုယ့်နိုင်ငံနဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်နိုင်ငံများရဲ့ သမိုင်းကြောင်းများကို လေ့လာစေခြင်းဖြင့် အနာဂတ်ကို ကောင်းစွာ တည်ဆောက်ပြီး ဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ်။
ဒါ့အပြင် မြို့ဧရိယာအတွင်းရှိ ကျောင်းပေါင်းစုံ သိပ္ပံပြပွဲများ၊ ပညာရပ်နှီးနှောဖလှယ်ပွဲများကို မြို့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့မှ ဦးဆောင်ကျင်းပပေးခြင်းဖြင့် မြို့ရဲ့ စီးပွားရေးနဲ့ ပညာရေးကို အဆင့်တစ်ခုရောက်အောင် မြှင့်တင်ပေးနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ သိပ္ပံရုပ်ရှင်ပွဲတော်များ၊ အနုပညာ ပွဲတော်များ ကျင်းပပေးခြင်းဖြင့် နည်းပညာနဲ့ ယဉ်ကျေးမှု အဆင့်အတန်းကို စဉ်ဆက်မပြတ် တိုးတက်စေနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါတွေကို မြို့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့က သက်ဆိုင်ရာ ၁၂ လ ရာသီပွဲတော်များနဲ့ ချိန်ညှိပြီး ကျင်းပပေးခြင်းအားဖြင့် မြို့နေလူထုကို စိတ်အပန်းပြေစေရုံမက လူငယ်ထုကိုလည်း ရာဇဝတ်မှုများ ကင်းကွာအောင်၊ မူးယစ်ထုံထိုင်းစေသော အရာများနဲ့ ကင်းဝေးသွားအောင် တဖက်တလမ်းက ကူညီပေးနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
မြို့နေလူငယ်ထုရဲ့ ပညာရေးတိုးတက်ဖို့ဆိုတာ စိတ်ရောကိုယ်ပါ ကြံ့ခိုင်မှ တိုးတက်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ မန္တလေးမြို့ဟာ အားကစားကွင်းများ၊ ပန်းခြံများ အတော်ရှားပါးတယ်လို့ ဆိုနိုင်ပါတယ်။ ရပ်ကွက်ကြီးတစ်ခုလုံးမှာတောင်မှ အားကစားကွင်း တစ်ခုလောက်သာ ရှိပြီး အများအားဖြင့်လည်း ဘောလုံးကွင်းလောက်ပဲ ရှိပြီး လူငယ်တွေ နေရာကျဉ်းကျဉ်းမှာပဲ စုစည်းကစားနေကြရပါတယ်။ ဘောလုံး ဝါသနာမပါတဲ့၊ သို့မဟုတ် အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် ဘောလုံးထက် အခြားအားကစားနည်းကို နှစ်သက်တဲ့ လူငယ်တွေအတွက် အလွန် ခက်ခဲပါတယ်။ အားကစားကလပ်တွေ ရှိပေမယ့်လည်း ဈေးကြီးမြင့်ခြင်း၊ လူများခြင်းကြောင့် အဆင်မပြေတာတွေ ရှိနေပါတယ်။ အဲဒီအတွက် အားကစားကွင်းကောင်း မဟုတ်တောင် ခြေညောင်းလက်ဆန့် အနားယူနိုင်မယ့် ကွင်းပြင်ဧရိယာ အနည်းငယ်ကို ရပ်ကွက်တိုင်းမှာ ဖန်တီးပေးစေချင်ပါတယ်။ ကျုံးဘေး ပလက်ဖောင်းပေါ်က အခမဲ့ အားကစားပြုလုပ်နိုင်တဲ့ ကိရိယာတွေကို အသုံးပြုသူ များပြားခြင်းဟာ သက်သေပဲ ဖြစ်ပါတယ်။